I-Huawei MediaPad M5 yolutsha: Iimpawu, iiNkcukacha kunye neXabiso | I-Androidsis
Ulutsha lweHuawei MediaPad M5: ithebhulethi entsha ithiwe thaca ngokusemthethweni
UAron Rivas | | Huawei, Amacwecwe e-Android
Emva kokuphehlelela I-Mediapad M5 kuFebruwari ophelileyo, uHuawei unento entsha eyahlukileyo yoku, kwaye ayikho enye ngaphandle kwe Ulutsha lweMediaPad M5, Inguqulelo enezinto ezithile zobuchwephesha ezisikiweyo kwicala elinye kunye nezinye ezithuthukisiwe, ezinje ngecandelo lokufota.
Ngokuqhelekileyo, «Ulutsha» izixhobo zijolise kubaphulaphuli abancinci abathanda ukuphatheka. I-Huawei MediaPad M5 yoLutsha ayikho ngaphandle koku. Sinikela kuwe!
Ulutsha lweHuawei MediaPad M5 lusandula ukwaziswa e-China. Le thebhulethi ine Iscreen se-10,1-intshi esixhasa isisombululo se-FullHD se-1.920 x 1.080 pixels. Iyahambelana nepensile ye-M-Pen Lite, eyamkela iidigri ezingama-2048 zoxinzelelo. I-chipset ye-Kirin 659 ikhona phantsi kwe-hood. Lilonke, liza ne-4GB ye-RAM kunye ne-64GB yokugcina eyandisiweyo eyakhelweyo.
Ukuza kwisebe lokucinga, isileyiti sele ixhotywe ngekhamera ye-8-megapixel (f / 2.0) kwipaneli esemva ene-autofocus. Kwiiselfie kunye nevidiyo, kukho enye 8-megapixel (f / 2.0) shooter ngaphambili, kodwa akukho autofocus. Kwiphambi kwesoftware, IMediaPad M5 yolutsha iibhutsi EMUI 8.0 ujongano olusekwe kwi-Android Oreo 8.0. Isixhobo sixhomekeke kwibhetri enkulu ye-7,500 mAh ngenkxaso yokutshaja ngokukhawuleza kwiimfuno zakho zamandla.
Kwiphambili lonxibelelwano, IMediaPad M5 yoHlelo loLutsha ineqhayiya le-C yohlobo C, IWi-Fi, iBluetooth, iGPS, kunye ne-3,5mm jack yomsindo. Kwezokhuseleko, kukho isithwebuli somnwe esakhelwe kwiqhosha lasekhaya elingaphambili ngaphambili.
IHuawei ikhuphe iMediaPad M5 yoLutsha yoHlelo ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo: iWi-Fi kuphela kunye neLTE. Ixesha langaphambili lixabisiwe kwi-1.899 yuan (~ 240 euros), ngelixa umahluko ohambelana nenethiwekhi uza nexabiso le-2.099 yuan (~ 265 euros). Ithebhulethi iye yaxhonywa kwi-odolo zangaphambili kwivenkile esemthethweni yaseHuawei e-China kwaye iyafumaneka ngombala weChampagne Gold.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » Ulutsha lweHuawei MediaPad M5: ithebhulethi entsha ithiwe thaca ngokusemthethweni
Iifowuni zeHuawei ezihlaziya kwi-EMUI 9.0 kule veki